Imijelo ebalulekileyo yeTelegram yakho | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Imijelo ebalulekileyo yeTelegram yakho
Njengoko abalandeli be-Androidsis beza kwazi kakuhle, zombini kwibhlog nakwisiteshi sevidiyo seYouTube, enye yeenethiwekhi zethu zonxibelelwano ezisebenzayo kunye nabasebenzisi kunye nenye yezona zisebenzayo Inkqubo yemiyalezo ekhawulezileyo yeTelegram apho Sinento elungileyo kunye Androidsis Community, un iqela elikhulu esele likhona kumalungu angama-10 Kwaye ibe yindawo enkulu yabasebenzisi abazimisele ukuncedana kunye nokwabelana ngolwazi.
Kungenxa yoko le nto mna ngokobuqu kwaye abantu abaninzi beya beqiniseka ngakumbi ngesicelo seTelegram nakweyiphi na into eyahlukileyo okanye abathengi abafumanekayo kuwo onke amaqonga. Injongo yale vidiyo kukubonisa uluhlu lwee amajelo abalulekileyo eTelegram yakho. Uthotho lwamajelo nje ukuba nje ubazi awuyi kuba nakho ukuhlala ngaphandle kwabo. Nazi ke iingcebiso zam ezahlukeneyo ngokubhekisele kwezi ndlela zibalulekileyo kwiTelegram yakho.
Nantsi inkcazo encinci yesitishi esicetyiswayo kunye nekhonkco ngqo ukuyifaka. Khumbula ukuba ukuze ungene kwezi majelo awodwa, kufuneka nje, lngokufanelekileyo babe ngabasebenzisi beTelegramCofa kwikhonkco kwaye ujoyine amajelo onomdla kuwe.
1 Isiteshi seCinema Solo
2 Ilahleko engenasandi
3 Ii-Androids kwihlabathi liphela
4 I-Technochollos 2018 kunye nokunye okuninzi
5 Iintengiso eziphezulu zeAmazon
Isiteshi seCinema Solo
Ijelo apho ukongeza kukwazi Khuphela amakhulu bhanyabhanya ukujonga ngokuthe ngqo kwikhompyuter yakho, i-Android, i-iOS okanye nayiphi na iqonga olifunayo kuba iTelegram iyafumaneka kuwo onke amaqonga akhoyo, Ikwasivumela ukuba sijonge yonke imixholo yayo njengokusasazwa kwevidiyo ke akufuneki ukhuphele nantoni na kwisixhobo sakho konke konke.
Olu khetho lokugqibela lulungele iikhompyuter zakho kwaye ngakumbi ii-BOXs zeTV kuba ngokufaka iTelegram kunye nokujoyina ijelo leSolo Cine, siya kuba nohlobo I-NETFLIX kwimfuno yasimahla.
Ngenisa ijelo ngokunqakraza apha
Ijelo apho I-albhamu epheleleyo yomculo olungileyo wexesha lonke kwabelwana ngawo mahala kumgangatho weFLAC, okanye yintoni owona mgangatho uphezulu wesandi kubasebenzisi abafuna kakhulu.
Joyina ijelo ngokunqakraza apha
Ii-Androids kwihlabathi liphela
Ii-Androids kwihlabathi liphela sisidalwa esiqala kwimbono yovuselelo yoMchasi-Kristu, umlawuli kunye nemodareyitha yoLuntu lwe-Androidsis olwenzileyo Ijelo elinomtsalane lokwabelana ngezo zicelo kwifomathi ye-apk, iimods kunye nezinye izinto esizithandayo esizithandayo kubasebenzisi be-Android.
I-Technochollos 2018 kunye nokunye okuninzi
Ijelo elinikezelwe ekuqokeleleni eyona teknoloji inikezela ngokubanzi kwezona ndawo zibalaseleyo kwiivenkile ezikwi-Intanethi kumnatha, iivenkile esisebenza nazo rhoqo kwaye ezivenkileni zisinika isiqinisekiso esipheleleyo kunye nokuzithemba okupheleleyo.
Ijelo apho ukongeza ukubonisa zonke ezi ntengiso, sikwasebenzisa ukukhuthaza zonke izipho zethu esiyenzayo kwi Androidsis.
Joyina ijelo apha
Iintengiso eziphezulu zeAmazon
Kwitshaneli Iintengiso eziphezulu zeAmazon, njengoko igama layo lisitsho, siya kuyifumana Zonke iintlobo zeemveliso ezinomdla ezinokufumaneka kwiAmazon.
Joyina ijelo ngokunqakraza apha.
Okokugqibela kwaye Ukwazi zonke iindaba kunye neempapasho esizenzayo kwibhlog nakwindlela ye-Androidsis YouTube, Androidsisvideo, Ndikushiya ikhonkco ngqo ukujoyina isitishi se-Androidsis. Ijelo kwaye sele sinamalungu angaphezu kwe-10.000.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Imijelo ebalulekileyo yeTelegram yakho
Eyona midlalo mincinci ye-Android
Khusela isiqithi sakho kwi-Dead Island Survivors: smash zombies kunye nokwakha ii-turrets